(၁၅) မိနစ် တရားထိုင်နည်း.....
ထူးခြားသော အကျိုးကျေးဇူးများ၊ထူးခြားသော ကံကောင်းမှုများ၊သင့်ထံသို့ ဧကန်အမြန် ရောက်ရှိလာပေလိမ့်မည့်
(၁၅) မိနစ် တရားထိုင်နည်း....
တနေ့လျှင် (၁၅)မိနစ်ခန့် တရားထိုင်ကြည့်ပါ။
“အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်သော ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် သတိကပ်၍သာလျှင် ထွက်သက်ကို ဖြစ်စေ၏။ ထွက်သက်ကို ထုတ်၏။
သတိကပ်၍သာလျှင် ၀င်သက်ကို ဖြစ်စေ၏။ ၀င်သက်ကို ရှိုက်ရှူ၏” (ဤကား သတိမြဲရာ ပထမာ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်)
“ထွက်သက်လေကို တိုတိုထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုတိုထုတ်သည် ဟု ကောင်းစွာ သိ၏။ ၀င်သက်လေကို တိုတိုရှုရှိုက်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုတိုရှုရှိုက်သည်ဟု ကောင်းစွာ သိ၏”(ဤကား ဒုမှာ တို ရှည်သိ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်)
“အလုံးစုံသော ထွက်သက်ဝင်သက်တို့၏ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး သုံးပါးလုံးကို ထင်ရှားစေလျှက် (ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ထိန်လင်းစေလျှက်) ထွက်သက်လေ ကို ထုတ်၏။ ၀င်သက်လေကို ရှိုက်ရှု၏”(ဤကား သုံးချက်သိမှာ တတိယာ သို့မဟုတ် လုံးစုံလင်းရာ တ-၌သာ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်)
“ရံခါအတွင်း၌ ထွက်လေ၀င်လေဟူသော ကာယ သို့မဟုတ် ပဋိဘာဂဖြစ်သော အဿာသပဿာသကာယကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရမည်။
ရံခါအပြင်၌ (အပြင်ကို ထုတ်၍) ထွက်လေ၀င်လေဟူသော ကာယ သို့မဟုတ် ပဋိဘာဂဖြစ်သော အဿာသပဿာသကာယကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်ပွားများ အားထုတ်ရမည်။
(ဤသည်မှာ အာနာပါနသမထ လေးဆင့် လုံးကို ပေါင်း၍ဟောထားခြင်းဖြစ်ပါသည်)
ထွက်သက်လေ၊ ၀င်သက်လေဟူသော ကာယ၌ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်၍လည်း နေရာ၏။”
အထက်ပါ ဖော်ပြချက်မှာ သတိပဋ္ဌာနသုတ်တော် တွင် မြတ်စွာဘုရား ရှင်ဟောကြားတော်မူသော အာနာပါနကျင့်စဉ် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
သမထဆိုတာ တနေရာတည်းကို စိုက်ရှုတာပါ၊ ၀ိပဿနာဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး ကို ဖြန့်ရှူတာလို့ မြေဇင်းဆရာတော်ကြီးက မိန့်တော်မူပါတယ။်
သမထယာနိကသမားအတွက် စတုတ္ထအဆင့်ကျင့်စဉ်မှာ ပဋိဘာဂ အလင်းနိမိတ်ရရှိပြီး ဥပစာဆိုက်သွားပြီဆိုရင် ၀ိပဿနာကို စတင်အား ထုတ်ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်။
၀ိပဿနာရှုမှတ်ရာတွင် ရုပ်ကို ရှုမှတ်ရမှာလား၊ နာမ်ကို ရှုမှတ်ရမှလား လို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ စာပေမှာတော့ သမထယာနိကလမ်းစဉ်နဲ့ အားထုတ်သူများအတွက် နာမ်ကို ရှုမှတ်ပွားများရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သမထ အားထုတ်မှု အားကောင်း၍ သမာဓိရင့်သန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ်။ ၀ိပဿနာသက်သက်ရှုမှတ် ပွားများသူများသူတွေကိုတော့ ရုပ်ကို ရှုမှတ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ရှု့နည်း ၃ မျိုး...
အရဟံ လို့ စိတ်ထဲက ဆိုပြီး ၀င်လေကို ရှူသွင်းပါ၊ အရဟံလို့ စိတ်ကဆိုပြီး ထွက်လေကို ပြန်ထုတ်ပါ၊
မိမိစိတ် ငြိမ်လာပြီ ဆိုရင် ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော် အရောက် အာရုံပြုပြီး ကိလေသာ ကင်းစင်တော် မူသော မြတ်စွာ ဘုရား ဆိုပြီး ၀င်လေ ထွက်လေ တိုင်းမှာ ရှူမှတ်ပေးပါ ၊
ဒီလိုနည်းနဲ့ အချိန် ရသလောက် ပွားများပေးပါ၊ ဘုရားရှင် ပေါ်မှာ ကြည်ညိုတဲ့ စိတ်တွေ များလာလေ တရားအလုပ် လုပ်ရတာ ချောမွေ့ လွယ်ကူလေ ပါပဲ။
အားလုံးသော သတ္တ၀ါတွေ ၀င်လေ တစ်ချက်… ချမ်းသာကြပါစေ ထွက်လေ တစ်ချက်. ဒီပုံစံနဲ့ မေတ္တာ ဘာဝနာ ပွားများ နိုင်ပါတယ်…
ကိုယ် ပွားများ ချင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ပွားများ နိုင်ပါတယ် ၀င်လေ ထွက်လေ ကပ်ပြီး ပွားများ တာက သမာဓိ ပိုရ လွယ်ပါတယ်..
ငါ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ စက်စုပ် စရာကြီး ပါတကား… လို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သုံးပိုင်း ပိုင်းပြီး ပွားများရ ပါမယ်၊ ပထမဆုံး ပုခုံးအထက် ဦးခေါင်း ပိုင်းကို အရင် ကြည့်ရပါမယ်.
မျက်စိကိုမှိတ် စိတ်ကို ဦးခေါင်းကို ပို့ထား ငါ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် စုက်ဆုပ် စရာကြီး ပါတကားလို့.. စိတ်ကဆိုပြီး ဦးခေါင်းထဲက ဦးဏှောက်တွေ အမြှေးတွေ မြင်လာတဲ့ အထိ ပွားများပေးပါ၊
တတိယ.. ခါးအောက်ပိုင်းအကုန် ခြေထောက် အထိ စိုက်ကြည့် ပွားများပါ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို တွယ်တာလွန်း အားကြီးရင် တရား အလုပ်မှာ နှောင့်နှေး တတ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီး ခေမာ ထေရီကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ တပ်မက်မှု ကင်းအောင် အသုဘ ဘာဝနာကို ပွားများ ကြရပါတယ်။
နေ့စဉ် (၁၅) မိနစ်ခန့် ဝိပဿနာမြတ်တရားအား ကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ် နိုင်ကြပါစေ.....။
ထူးခွားသော အကြိုးကြေးဇူးမြား၊ထူးခွားသော ကံကောငျးမှုမြား၊သငျ့ထံသို့ ဧကနျအမွနျ ရောကျရှိလာပလေိမျ့မညျ့
(၁၅) မိနဈ တရားထိုငျနညျး....
တနလြေှ့ငျ (၁၅)မိနဈခနျ့ တရားထိုငျကွညျ့ပါ။
အမြိုးသမီးယောဂီမြားမှာ မိနျးမထိုငျ ကြုံ့ကြုံ့ထိုငျလြှကျလညျးကောငျး ခါးကို မတောငျ့လှနျး၊ မလြော့မကုနျးလှနျးဘဲ အလိုကျသငျ့သလို တာရှညျထိုငျနိုငျအောငျ ထားပါ။
“အာနာပါနကမ်မဋ်ဌာနျးကို အားထုတျသော ယောဂီပုဂ်ဂိုလျသညျ သတိကပျ၍သာလြှငျ ထှကျသကျကို ဖွဈစေ၏။ ထှကျသကျကို ထုတျ၏။
သတိကပျ၍သာလြှငျ ဝငျသကျကို ဖွဈစေ၏။ ဝငျသကျကို ရှိုကျရှူ၏” (ဤကား သတိမွဲရာ ပထမာ အစီအစဉျဖွဈပါသညျ)
“ထှကျသကျလကေို တိုတိုထုတျသောယောဂီပုဂ်ဂိုလျသညျ တိုတိုထုတျသညျ ဟု ကောငျးစှာ သိ၏။ ဝငျသကျလကေို တိုတိုရှုရှိုကျသောယောဂီပုဂ်ဂိုလျသညျ တိုတိုရှုရှိုကျသညျဟု ကောငျးစှာ သိ၏”(ဤကား ဒုမှာ တို ရှညျသိ အစီအစဉျဖွဈပါသညျ)
“အလုံးစုံသော ထှကျသကျဝငျသကျတို့၏ အစ၊ အလယျ၊ အဆုံး သုံးပါးလုံးကို ထငျရှားစလြှေကျ (ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးကို ထိနျလငျးစလြှေကျ) ထှကျသကျလေ ကို ထုတျ၏။ ဝငျသကျလကေို ရှိုကျရှု၏”(ဤကား သုံးခကျြသိမှာ တတိယာ သို့မဟုတျ လုံးစုံလငျးရာ တ-၌သာ အစီအစဉျဖွဈပါသညျ)
“ရံခါအတှငျး၌ ထှကျလဝေငျလဟေူသော ကာယ သို့မဟုတျ ပဋိဘာဂဖွဈသော အဿာသပဿာသကာယကို အဖနျတလဲလဲ ရှုမှတျပှားမြားအားထုတျရမညျ။
ရံခါအပွငျ၌ (အပွငျကို ထုတျ၍) ထှကျလဝေငျလဟေူသော ကာယ သို့မဟုတျ ပဋိဘာဂဖွဈသော အဿာသပဿာသကာယကို အဖနျတလဲလဲ ရှုမှတျပှားမြား အားထုတျရမညျ။
(ဤသညျမှာ အာနာပါနသမထ လေးဆငျ့ လုံးကို ပေါငျး၍ဟောထားခွငျးဖွဈပါသညျ)
“ထှကျသကျလေ၊ ဝငျသကျလဟေူသော ကာယ၌ ဖွဈခွငျးသဘောကို အဖနျတလဲလဲ ရှုမှတျ၍ နရော၏။ ထှကျသကျလေ၊ ဝငျသကျလဟေူသော ကာယ၌ ပကျြခွငျးသဘောကို အဖနျတလဲလဲ ရှုမှတျ၍လညျး နရော၏။
ထှကျသကျလေ၊ ဝငျသကျလဟေူသော ကာယ၌ ဖွဈခွငျး၊ ပကျြခွငျးသဘောကို အဖနျတလဲလဲ ရှုမှတျ၍လညျး နရော၏။”
(ဤကား အာနာပါနသမထကို အဦးမူ၍ ၀ိပဿနာရှုမှတျပှားမြားရပုံ ဖွဈပါသညျ)
သမထဆိုတာ တနရောတညျးကို စိုကျရှုတာပါ၊ ၀ိပဿနာဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျ တခုလုံး ကို ဖွနျ့ရှူတာလို့ မွဇေငျးဆရာတျောကွီးက မိနျ့တျောမူပါတယ။ျ
သမထယာနိကသမားအတှကျ စတုတ်ထအဆငျ့ကငျြ့စဉျမှာ ပဋိဘာဂ အလငျးနိမိတျရရှိပွီး ဥပစာဆိုကျသှားပွီဆိုရငျ ၀ိပဿနာကို စတငျအား ထုတျရှုမှတျနိုငျပါတယျ။
၀ိပဿနာရှုမှတျရာတှငျ ရုပျကို ရှုမှတျရမှာလား၊ နာမျကို ရှုမှတျရမှလား လို့ မေးစရာ ရှိပါတယျ။ စာပမှောတော့ သမထယာနိကလမျးစဉျနဲ့ အားထုတျသူမြားအတှကျ နာမျကို ရှုမှတျပှားမြားရမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သမထ အားထုတျမှု အားကောငျး၍ သမာဓိရငျ့သနျနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ပျါ။ ၀ိပဿနာသကျသကျရှုမှတျ ပှားမြားသူမြားသူတှကေိုတော့ ရုပျကို ရှုမှတျဖို့ တိုကျတှနျးထားပါတယျ။
ရှု့နညျး ၃ မြိုး...
အရဟံ လို့ စိတျထဲက ဆိုပွီး ဝငျလကေို ရှူသှငျးပါ၊ အရဟံလို့ စိတျကဆိုပွီး ထှကျလကေို ပွနျထုတျပါ၊
မိမိစိတျ ငွိမျလာပွီ ဆိုရငျ ဘုရားရှငျရဲ့ ဂုဏျတျော အရောကျ အာရုံပွုပွီး ကိလသော ကငျးစငျတျော မူသော မွတျစှာ ဘုရား ဆိုပွီး ဝငျလေ ထှကျလေ တိုငျးမှာ ရှူမှတျပေးပါ ၊
ဒီလိုနညျးနဲ့ အခြိနျ ရသလောကျ ပှားမြားပေးပါ၊ ဘုရားရှငျ ပျေါမှာ ကွညျညိုတဲ့ စိတျတှေ မြားလာလေ တရားအလုပျ လုပျရတာ ခြောမှေ့ လှယျကူလေ ပါပဲ။
အားလုံးသော သတ်တဝါတှေ ဝငျလေ တဈခကျြ… ခမျြးသာကွပါစေ ထှကျလေ တဈခကျြ. ဒီပုံစံနဲ့ မတ်ေတာ ဘာဝနာ ပှားမြား နိုငျပါတယျ…
ကိုယျ ပှားမြား ခငျြတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပှားမြား နိုငျပါတယျ ဝငျလေ ထှကျလေ ကပျပွီး ပှားမြား တာက သမာဓိ ပိုရ လှယျပါတယျ..
ငါ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျဟာ စကျစုပျ စရာကွီး ပါတကား… လို့ ခန်ဓာကိုယျကို သုံးပိုငျး ပိုငျးပွီး ပှားမြားရ ပါမယျ၊ ပထမဆုံး ပုခုံးအထကျ ဦးခေါငျး ပိုငျးကို အရငျ ကွညျ့ရပါမယျ.
မကျြစိကိုမှိတျ စိတျကို ဦးခေါငျးကို ပို့ထား ငါ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ စုကျဆုပျ စရာကွီး ပါတကားလို့.. စိတျကဆိုပွီး ဦးခေါငျးထဲက ဦးဏှောကျတှေ အမွှေးတှေ မွငျလာတဲ့ အထိ ပှားမြားပေးပါ၊
တတိယ.. ခါးအောကျပိုငျးအကုနျ ခွထေောကျ အထိ စိုကျကွညျ့ ပှားမြားပါ၊ ခန်ဓာကိုယျကို တှယျတာလှနျး အားကွီးရငျ တရား အလုပျမှာ နှောငျ့နှေး တတျပါတယျ။
နာမညျကွီး ခမော ထရေီကို ကွညျ့ပွီး သိနိုငျပါတယျ၊ ဒါကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာ တပျမကျမှု ကငျးအောငျ အသုဘ ဘာဝနာကို ပှားမြား ကွရပါတယျ။
နစေ့ဉျ (၁၅) မိနဈခနျ့ ဝိပဿနာမွတျတရားအား ကငျြ့ကွံပှားမြား အားထုတျ နိုငျကွပါစေ.....။